Alahady fahatelo amin’ny Karemy – 08/03/2015 – Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady fahatelo amin’ny Karemy – 08/03/2015 – Toriteny
Tsy mamela hipetra-poana ny fitiavana an’Andriamanitra, izay no foto-kevitra hanentanan’ny fiangonana antsika amin’izao alahady sy mandritra ity herinandro ity. Dia miaina manomboka eo amin’ny Paka ny Jody, satria dia efa hitantsika tamin’ny Evanjely teo: akaiky ny Pakan’ny Jody ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa niaraka tamin’ny mpianany nankalaza n Pakan’ny Jody.
Fa inona moa ny Pakan’ny Jody?
Amin’ny sasak’alin’ny Paka miditra lalindalina kokoa isika manazava an’io, fa ny Pakan’ny Jody dia fahatsiarovana ny nanafahan’Andriamanitra ny vahoaka Israely teoamin’ny fanandevozana tany Ejipta, izay ilay Pakan’ny Jody. Ary nametraka Andriamanitra hoe ankalazaina ireo isan-taona izao zava-mahagaga izao, izay ilay Pakan’ny Jody. Ka isaky ny fetin’ny Paka dia fotoana fanaovana pèlerinage any Jerosalema mankany amin’ny tempoly, ankalazain’ny Jody n’aiza n’aiza misy azy io fetin’ny Paka io. Ka i Jesoa nankalaza ny Pakan’ny Jody, dia ny Evanjely re-tsika teo, Jesoa mankalaza ny Pakan’ny Jody, fa milaza ihany koa ny Paka dia fitsanganan’I Kristy; izany hoe miainga amin’ny Pakan’ny Jody ary mifarana any amin’ny Pakan’I Kristy. Izay ny evanjely re-tsika teo. Ka I Jesoa ao amin’ny Evanjelin’I Md Joany no jerena, raha ny Evanjelin’i Md Joany manontolo no vakiana dia ahitana fa im-balo i Jesoa no niakatra nankany Jerosalema nanao ny pèlerinage, im-balo izy no niakatra tany Jerosalema.
Dia raha hiverenantsika ary ny Evanjely dia jerentsika kely hoe inona ny zavatra nitranga? I Jesoa niakatra ho any an-tempoly, niditra tao an-tempoly izy, inona no zavatra hitan’i Jesoa tao an-tempoly? Ny zavatra hitany tao dia tao ny omby aman’ondry, tao ihany koa ny mpanakalo vola, ta koa ny mpivarotra voromailala, ao an-tempoly izay toerana masina, ao amin’ny tranon’Andriamanitra dia izany no hita ka tezitra I Jesoa. Inona anefa no anton’ireo zavatra ireo hita ao an-tempoly? Ny antony dia izao; ao an-tempoly ny fanaovana sorona ka ny olona avy lavitra tonga hivavaka, tonga hanatitra sorona hanatitra sorona ao an-tempoly, sarotra ho an’ny olona ny handroaka omby na ondry entina avy lavitra hatao sorona ao an-tempoly. Dia misy ihany koa ireo Jody famieli-patrana eran’ny vazan-tany, misy tany Roma, misy tany amin’ny faritr’i Grèce, miparitaka ny Jody, dia rehefa tonga izy dia tsy manam-bola fa vola avy any amin’ireo firenena izay niaviany no entiny ka ny vola avy any tsy azo entina arotsaka ao an-tempoly ho rakitra satria vola maloto ka tsy maintsy atakalo vola Jody ireny. Satria ao amin’ny fandatsahan-drakitra ao an-tempoly tsy azo andatsahana vola hafa afa-tsy ny vola Jody. Dia izay no nisian’ny mpanakalo vola Jody, ary ny voromailala dia fanatitra atolotry ny olona mahantra, ka na ny Ray aman-dRenin’i Jesoa dia mba faly ihany koa nividy izany atolotra atao sorona ao an-tempoly satria dia io no natolony tamin’i Jesoa natolotra tao an-tempoly. Izany no antony iray hoe ilaina ireo mpivarotra tao an-tempoly ireo satria manamora ny fomba fivavaky ny olona amin’ny fanolorana sorona ao an-tempoly
Nahita ireo I Jesoa dia nazerany sy noroahiny, nokapohiny ny ondry sy ny omby hiala tao an-tempoly, nazerany ny latabatry ny mpanakalo vola, nanao fihetsika mahery i Jesoa. Ny antony dia tokony hajaina ny tranon’Andriamanitra, trano masina sy trano fivavahana, trano natao hihaonana manokana amin’Andriamanitraka omena ny toerana ambony sy hajaina.
Toriteny Alahady 25-09-2016